Ogaden News Agency (ONA) – Umadaha jiritaankooda waxay ku xidhantahay akhlaaqdooda
Umadaha jiritaankooda waxay ku xidhantahay akhlaaqdooda
Posted by ONA Admin	/ April 2, 2014
Umadda Somaliyeed arimaha ay kusoo badbaaday waxaa ugu mudnaa dadaalkii ay culumada Somaliyeed ku hor-joogsadeen isku daygii gumaysiyadii cadaanka ahaa ee ree Yurub ay ku doonayeen inay kaga foogeeyaan shucuubta muslimiinta ah markay qabsadaan akhlaaqda suuban ee diinta islaamka ay ina fareyso. Dadaalkii noocaa ahaa waxaad moodaa hadda inuu gabaabsi yahay, gaar ahaan markay culumada intoodii badnayd u dhaqaaqeen tacab aduunyo, taasoo ku riday cabsi iyo nolol jacayl.
Itobiya waxaa loo wakiishay hadda inay akhlaaqda ka lumiso muslimiinta ku nool gobolka gaara ahaan Somalida oo taariikh ahaan la ogyahay inay yihiin kuwa ku fidiyay diinta islaamka Geeska Afrika. Waxayna xooga saartay inay mukhadaraadka ku baahiso Somalida meel ay dagaanba, sidoo kale ay ku faafiso gabdho cuduro qaba oo jidhkooda iibsanaya.
Shabakada badan ayaa arimahaa wax ka qoray, ama ha ahaadeen kuwa Ogadenya wax ka qora ama ha ahaadeen kuwa Somaliya wax ka qoree. Shabakadahaa waxay aad uga digeen dhibaatooyinka ay Itobiya ku dhex wado dhalinyarada Somaliyeed, taasoo culumada qaarkood ay u adkaysan waayeen kana hadleen. Waa haduu hadal waxtarayo, waase adcaful iimaantii uu Rasuulka CS inoo sheegay.
Shabakadda Faallo ayaa hadda ka hor arintaa wax ka qortay oo sheegtay in ay culumada qaarkood ka hadleen TV-ga Itobiya ay ka samaysay Jigjiga oy yidhaahdeen waxaa lagu dhiirigaliyaa dhaqan xumada iyo fasahaadka. Waxaa ka mid ahaa qoraalkaa; ( .. Wadaadadu waxa ay sheegeen in akhlaaq xumadani ay guri kasta toos ugalayso bulshadana ay ku dhiirigalinayso balwadaha xun xun in ay ku sii fogaadaan. Dhinaca kale Culimada ayaa sheegay in Talefishinka iyo idaacada JigJiga Fm midna ayna ku lahayn wax barnaamij ah oo wacyi galin diineed ah halka dhinaca kale maamulku uu xooga saaray baahinta xumaanta.)
Dhanka shabakadaha wax ka qora arimaha Somaliya, waxaa ka mid ah shabakadda boramanews oo qortay taariikhda markay ahayd 31-03-14 in booliska Hargaysa uu qabtay haamo khamri ah oo soo waarideen Sirdoonka Itobiya ee jooga Hargaysa. Waxay qortay shabakadda; (Qaar ka tirsan culumada Hargaysa oo u adkaysan waayay fasahaadka saraakiisha Itobiya ka wadaan Somaliland oo la hadlay wasiirka arimaha gudaha Somaliland Warancade ayaa u gudbiyay dareenkooda ku aadan dhacdadaas foosha xun ee masuuliinta Itobiya u fadhiya Hargaysa ay kaga macaashaan deegaanada Somaliland.)
Waxay intaa raacisay shabakadda in masuuliintaSomalilandaanay ka hadlin baayacmustarigaa ay wadaan Sirdoonka Itobiya iyagoo raaciyay in aanay ahayn dhacdadani midii ugu horeysay. Halkan ka akhri
Gabayaaga weyn ee lagu magacaabo Axmad Showqi ayaa yidhi;
وإنما الأُممُ الأخلاقُ ما بقيت ….. فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا
Macnaha baytka gabayaaga wuxuu ku tilmaamay in Jiritaanka Umaduhu ay ku xidhan tahay Akhlaaqdooda, taasoo haddi la waayo iyagana la waayi. Somali maalin maalmaha ka mdi ah ayay ogaan doonaan Itobiya waxay la maagan tahay hadaanay ka dhiidhiyin.
waxaan anu qabaa fikirkaa mudana waa uu igu dhax waree gayay waxan sii wax looga qaban lahaa balse waxan quustay markii aan arkay masuuliyiintii ugu sareeyay somalida itobiya oo si ay uga marxabay siiyan madaxda federalka itobiya ay la cabayan khari lana tumanayan
waxan anigaygan goobjoog uhaa habeen habeenada kamida in aan idhahayga ku arkay wixiin an laha maa wax laga qabto balse ragii wax ka qaban laahaa oo hoolka sayidka maxamed, balse anu aan ugu yeedho hoolka macsiyada umada ayaan arkay niman kiii oo khamriga sida fantada udal banaya
markaa waxan idhi ilahay umadan ha u gar garo